Ciyaartii kubbadda cagta ee dagaalka weyn horseedday - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaCiyaartii kubbadda cagta ee dagaalka weyn horseedday
1969-kii dalalka El Salvador iyo Honduras ayaa waxaa dhex maray dagaal afar-maalmood socday kaasi oo galaaftay nolosha kumanaan qof halka kumanaan kale oo dheeraad ahna ay barakaceen- waxaana weli la xususustaa dagaalkaasi oo sababtissa ay lahayd ciyaar Kubada Cagta ah.
Cayaartaas ayaa lagu ciyaarayay garoonka Kubadda Cagta ee Mexico Waxaana loogu oo baxayay Koobkii Adduunka ee 1970-kii. Honduras El Salvador ayaanan xilligaasi horay uga qeeyb qaadan tartartanka Koobka Aduunka.
Lugtii koobaad ayaa waxaa 1-0 ku badisay Honduras oo lagu ciyaarayay magaala madaxdeeda ee Tegucigalpa. Balse lugtii labaad ayaa waxaa El Salvador u suura gashay in ay 3 gool dhaliso. Waxaana la sheegay in labada cayaarba ay khalalaase dheceen.
Markii la marayay daqiiqaddii 11-naad ee waqtiga dheeradka ah cayaarhan Mauricio “Pipo” Rodríguez oo u dheelayay , El Salvador ayaa waxaa si khalad loogu riday aagga rigoorada ee Honduras. Waxaana taasi ay sababtay in El Salvador ay 3-2 ku hogaamiso iyadoo la marayo waqti ay aad ugu adagtahay in ay goolka barbaraha keensadaan.
“Markii aan dhaliyay goolka, waxaan, xaqiiqsaday in waqti aad u yar ay ka hartay ciyaarta ayna adag tahay in ay dhaliyaan goolka bareejada ah,” ayuu 50 sano kulankaasi kadib Rodríguez shaagay. Waan hubay in aan badinayno cayaartaasi ayuu intaasi ku daray.
Saddex toddobaad kadib, labada waddan waxaa ka dhex qarxay dagaal.
El Salvador oo qiyaas ahaan la’eg Wales ayaa waxaa 1969-kii ku noolaa ilaa 3 milyan oo qof. Inta badan El Salvador waxaa maamulayay dad gaar ah oo sheeganayay in ay iyaga leeyihiin dhulka.
Sidaas darteed qarnigii labaatanaad oo dhan dadka reer Salvador waxa ay u haajirayeen Honduras iyagoo ka faa’iidaysanaya dhul-beereedka dalkaasi iyo shirkadaha Mareykanka ee ka hawl galayay Honduras.
“Khilaafkan ayaa waxaa uu salka ku hayay dhulka banaan, dadka oo aad u badan iyo deegaanka oo aad u yar ,” waxaa sidaasi sheegay said Dan Hagedorn, oo wax ko qoray dagaalkii 100-Ka saacadood ee dhex-maray labada dal.
Dawladda Madexweynaha Salvador Fidel Sánchez Hernández ayaa la daalaa dhacaya tirada badan ee muhaajiriinta ah ee dalka dib ugu soo laabanayso iyadoo dadka sheeganaya lahaanshaha dhulkaasi ay ku daalayaan sidii tallaabo milatari looga qaadi muhaajiriinta.
Cayaartaasi ayaa waxa ay sii xumeeysay xirrirka labadaasi dal.
Waziirka Arrimaha Gudaha Francisco José Guerrero ayaa sheegay in 12,000 oo qof ee reer salvador ay xilligaasi isaga soo baxeen Honduras ka dib ciyaartii labaad, wargeyska the Guardian ee ka soo baxa UK ayaa baahiyey jirdilka la sheegay in loo geystay dadka reer Salvador ay hoos u dhigtay sumacaddii cayaaraha caalamiga ah.
Maalin ka dib ciyaartaasina warbaahinta Maraykanka ee UPI ayaa boggeeda hore ku daabacday in xifaaltanka ciyaarta ay ku awood roonaatay El Salvador, taasi oo ay guusha ku raacday 3-2.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in 1700 oo booliska Mexico ah ay ku sugnaayeen garoonka ay ka dhacaysay cayaarta si ay uga hortagaa rabshadaha.
Waxaa sidoo kale la sheegay in taageerayaasha Salvador ay ku qeeylinayeen hal-ku-dhigyo ay ka mid ahaayeen gacan ku “dhiigleyaal, dhiigleyaal”
“Dagaalkaasi wuu dhici lahaa haddii uu goolkaasi dhalan lahaa iyo haddii kaleba.” Ayuu yiri Rodríguez
Honduras iyo El Salvador ayaa labadooduba dagaalkii labaad ee adduunka isu isticmaalay diyaarado uu Mareykanka Sameeyay.
Maalmo ka dibna, dagaalka xuduuda ayaa sii xoogaystay. 14-kii bishii July El Salvador ayaa ciidamadeeda ku amartay in ay weeraraan Honduras, waxayna bilaabeyn duqeyaan dhanka cirka ah oo ay ku qadaan dalkaasi.
Weli xasarad ayaa ka dhex taagan dalalka El Salvador iyo Honduras, oo waxaa u dhaxeeya khilaaf dhanka soohdinta ah waxaana kiiskaasi yaalla Maxkamada Caalamiga ee Cadaaladda ee ICJ.